I-Password Setha kabusha
Sicela ufake ikheli le-imeyili akhawunti yakho. A ikhodi yokuqinisekisa kuzothunyelwa kuwe. Uma uke wathola ikhodi yokuqinisekisa, uyokwazi ukukhetha iphasiwedi entsha ukuze akhawunti yakho.
Ingabe ufuna ukwakha ibhizinisi eliku-intanethi?
Singakusiza kunoma iyiphi imboni!
IMALI | UKUTHENGISA IZINDLU | INTERNET | I-CORPORATE | UKUPHILA
I-Carl Henry Global - Inqubomgomo Yobumfihlo ye-GDPR nokusetshenziswa kwe-Cookie (ayikho i-headngs)
Yiluphi ulwazi esikuqoqayo?
Siqoqa ulwazi kuwe uma ubhalisa kusayithi lethu, wabeka i-oda, ubhalisele iphephandaba lethu, ugcwalise ifomu noma Izinto zokubeka enqoleni yakho yokuthenga.
Uma uyala noma ubhalisa kusayithi lethu, uma kufanelekile, ungacelwa ukuba ufake igama lakho: igama, ikheli le-e-mail, ikheli leposi noma inombolo yocingo. Nokho, ungase uvakashele isayithi lethu ngokungaziwa.
I-Google, njengomthengisi wesithathu, isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso kusayithi lakho. Ukusetshenziswa kwe-Google kwekhukhi ye-DART kwenza sikwazi ukuhambisa izikhangiso kubasebenzisi bakho ngokusekelwe ekuvakasheni kwabo kumasayithi akho nakwamanye amasayithi ku-inthanethi. Abasebenzisi bangase baphume ekusebenziseni ikhukhi le-DART ngokuvakashela isikhangiso se-Google kanye nenqubomgomo yobumfihlo yenethiwekhi yokuqukethwe.
Sisebenzisani ulwazi lwakho?
Noma yiluphi ulwazi esiqoqa kuwe lungasetshenziswa ngenye yezindlela ezilandelayo:
Ukuze wenze isipiliyoni sakho ngokwakho - (ulwazi lwakho lusisiza ukuba siphendule kangcono izidingo zakho ngabanye)
Ukuthuthukisa iwebhusayithi yethu - siqhubeka silwela ukuthuthukisa ama-website wethu iminikelo ngokusekelwe kolwazi nempendulo esiyithola kuwe
Ukuthuthukisa isevisi yamakhasimende - ulwazi lwakho lusisiza ukuba siphendule ngokwengeziwe izicelo zakho zesevisi yamakhasimende nezidingo zokusekela
Ukucubungula ukuthengiselana - Imininingwane yakho, kungakhathaliseki ukuthi isesidlangalaleni noma yangasese, ngeke ithengiswe, ishintshwe, idluliselwe, noma inikezwe kunoma yimuphi omunye inkampani nganoma yisiphi isizathu, ngaphandle kwemvume yakho, ngaphandle kwenjongo ecacile yokuletha umkhiqizo othengiwe noma isevisi eceliwe.
Ukuphatha ukunikezwa kwethu - umncintiswano, ukukhuthazwa, inhlolovo noma enye indawo yesayithi
Ukuthumela ama-imeyili ngezikhathi ezithile - Ikheli le-imeyili oyinikezela ukucubungula i-oda, lingasetshenziselwa ukukuthumela ulwazi nezibuyekezo eziphathelene nomyalelo wakho, ngaphezu kokuthola izindaba zenkampani ezithile, izibuyekezo, ulwazi oluhlobene nomkhiqizo noma yesevisi, njll.
Qaphela: Uma kunoma yisiphi isikhathi ungathanda ukuzikhiphe ohlwini ekutholeni ama-imeyili esizayo, sifaka imiyalelo eningiliziwe yokuzikhiphelela ngaphansi kwe-imeyili ngayinye.
Sisebenzisa izinyathelo zokuphepha ezihlukahlukene ukugcina ukuphepha kolwazi lwakho lomuntu siqu uma ubeka umyalelo noma ufaka, uhambisa, noma ufinyelele ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Sinikeza ukusebenzisa iseva ephephile. Yonke imininingwane ehlinzekwa ebucayi / yekhredithi idluliselwa ngobuchwepheshe be-Secure Socket Layer (SSL) bese ibhalwa kuDeskithophu yethu yokukhokha abahlinzeki bezinsizakalo kuphela ukuze ifinyeleleke kulabo abagunyaziwe ngamalungelo akhethekile okufinyelela kulezo zinhlelo, futhi kudingeka ukuba ulwazi luyimfihlo.
Ngemuva kokuthengiselana, imininingwane yakho yangasese (amakhadi esikweletu, izinombolo zokuphepha kwezenhlalo, ezezimali, njll) ngeke ligcinwe kumaseva ethu.
Ingabe sisebenzisa amakhukhi?
Yebo, ama-cookies amafayela amancane ukuthi isayithi noma umnikezeli wesevisi uyadlulisela kuma-computer akho kanzima drive ngokusebenzisa isiphequluli sakho sewebhu (uma uvumela) okwenza amasayithi noma izinhlelo zokuhlinzeka ngezinsizakalo zikwazi ukubona isiphequluli sakho futhi zithinte futhi zikhumbule ulwazi oluthile.
Sisebenzisa amakhukhi ukusisiza ukukhumbula nokucubungula izinto enqoleni yakho yokuthenga, ukuqonda nokugcina izintandokazi zakho ukuvakashelwa esikhathini esizayo futhi uqoqe idatha ehlanganisiwe mayelana nesayithi le-traffic kanye nokusebenzisana kwesayithi ukuze sikwazi ukunikeza okuhlangenwe nakho okungcono kwamathuluzi namathuluzi esikhathini esizayo.
Uma ukhetha, ungakhetha ukuthi ikhompiyutha yakho ikuxwayise njalo lapho ikhukhi ithunyelwa, noma ungakhetha ukuvala wonke amakhukhi ngezilungiselelo zesiphequluli sakho. Njengamawebhusayithi amaningi, uma uvala amakhukhi akho, ezinye zezinsizakalo zethu zingase zingasebenzi kahle. Noma kunjalo, usengakwazi ukubeka ama-oda ngokuxhumana nomthengi.
Ingabe sichaza noma yiluphi ulwazi kumaqembu angaphandle?
Asithengisi, ukuhweba, noma ukudlulisela kwezinye izinhlangano ngaphandle kolwazi lwakho olubonakalayo. Lokhu akubandakanyi abesithathu abazethembayo abasisiza ekusebenzeni iwebhusayithi yethu, ekwenzeni ibhizinisi lethu, noma ekusebenzeni, uma nje lawo maqembu avuma ukugcina lolu lwazi oluyimfihlo. Singase futhi sikhulule ulwazi lwakho uma sikholelwa ukukhululwa kufanelekile ukuhambisana nomthetho, ukuphoqelela izinqubomgomo zethu zesayithi, noma ukuvikela amalungelo ethu noma amanye, impahla noma ukuphepha. Kodwa-ke, ulwazi olungabonakali lwabavakasheli olungabonakali lunganikezwa kwamanye amaqembu ukukhangisa, ukukhangisa, noma ezinye ukusetshenziswa.
Ngezinye izikhathi, ngokuqonda kwethu, singabandakanya noma sinikeze imikhiqizo yangaphandle noma amasevisi kuwebhusayithi yethu. Lezi zindawo zesithathu zinezinqubomgomo zobumfihlo ezihlukile futhi ezizimele. Ngakho-ke asikho umthwalo wemfanelo noma umthwalo wokuqukethwe kanye nemisebenzi yalezi zingosi ezixhunyiwe. Noma kunjalo, sifuna ukuvikela ubuqotho besayithi lethu futhi siyakwamukela noma yikuphi umbiko ngalezi zingosi.
I-California Online Protection Protection Act
Ngenxa yokuthi siyazisa ubumfihlo bakho sithathe izinyathelo ezidingekayo zokuhambisana nokulandela umthetho we-California Online Protection Protection Act. Ngakho-ke ngeke sisakaze ulwazi lwakho lomuntu siqu kumaqembu angaphandle ngaphandle kwemvume yakho.
Njengengxenye ye-California Online Protection Protection Act, bonke abasebenzisi besayithi lethu bangenza noma yiziphi izinguquko kolwazi lwabo nganoma yisiphi isikhathi ngokungena kwiphaneli yokulawula bese beya ekhasini 'Hlela iphrofayela.'
Ukulandelwa Kwemfihlo Yokuvikela Ubumfihlo ku-Inthanethi
Sivumelana nezidingo ze-COPPA (I-Childrens Online Protection Protection Act), asiqoqa noma yiluphi ulwazi kunoma ubani ngaphansi kweminyaka engu-13. Iwebhusayithi yethu, imikhiqizo kanye nezinsizakalo konke kuqondiswe kubantu okungenani abaneminyaka engu-13 ubudala noma ngaphezulu.
Online Inqubomgomo yemfihlo kuphela
Le nqubomgomo yobumfihlo ye-intanethi isebenza kuphela kolwazi oluqoqwe ngewebsite yethu hhayi kolwazi oluqoqwe ungaxhunyiwe ku-intanethi.
Sicela futhi uvakashele izigaba zethu zeMigomo nemibandela esungula ukusetshenziswa, izinkampani zokuzikhwabanisa, nokulinganiselwa kwecala elilawula ukusetshenziswa kwewebhsayithi yethu http://www.carlhenryglobal.com/terms-and-conditions
Ngokusebenzisa isayithi lethu, uyavuma inqubomgomo yethu yobumfihlo.
Izinguquko kumgomo wethu wobumfihlo
Uma sinquma ukushintsha inqubomgomo yethu yobumfihlo, sizothumela lezo zinguquko kuleli khasi, futhi / noma ubuyekeze idethi yokuguqula inqubomgomo yangasese ngezansi.
Le nqubomgomo igcine ukuguqulwa ku-25 / 03 / 2018
Amanye amawebhusayithi ethu
UCarl Henry Finance
Carl Henry Impahla
UCarl Henry Modular
Qasha ukuthenga iTrust
I-Carl Henry Inthanethi
UCarl Henry Yenza Imali Online
I-Carl Henry Domains
UCarl Henry Ukubamba
I-Carl Henry Corporate
UCarl Henry Lifestyle
Inikwe amandla yi-JS Network Solutions
Vakashela i-Social Media yethu